Maalinta: 8 Oktoobar 2019
Joojinta guur guura ayaa laga dhisayaa Salim Dervişoğlu Street, kaas oo ka duwan wadada D-100, halkaasoo gaadiidka dadweynaha loo adeegsado degmooyinka Kocaeli ee Karamürsel, Gölcük iyo Başiskele. Rakaabka gaadiidka dadweynaha [More ...]
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, oo dhageysta codka ardayda isla markaana dhageysanaya baahiyahooda, ayaa weli sii wadaya go'aamada ka farxiya ardayda. Hal-ku-dhigga “Magaalo-madaxeedka ardayda u habboon, geçiren, waxay hirgalisay adeegyo wax ku biiriya dhaqaalaha ardayda meelo badan laga bilaabo biilasha biyaha iyo gaadiidka. [More ...]
Aqoon isweydaarsiga “Nidaamka Tareenka” oo ay soo qabanqaabisay cutubyo ka socda IMM, waxaa la go’aamiyay in la dardar geliyo maalgashiga metroga iyo in xoogga la saaro teknoolojiyadda gudaha. Qaybta Nidaamka Tareenka ee Magaalada Istanbul (IMM) Waaxda Tareenka waxay qabatey aqoon isweydaarsi Sistem Rail ”iyadoo ay ka qeyb galayaan aqoonyahano ka socda jaamacado kala duwan. Khudbadda furitaanka aqoon isweydaarsiga [More ...]
Marka la eego baaxadda mashruuca mas'uuliyadda bulshada oo ay si wada jir ah u abaabuleen Eskişehir Magaalo Weyn iyo Iskuullada Özel Çağdaş, ardayda 42 waxay aqriyaan buugaag ku saabsan taraamyada leh hal-ku-dhegga 'Akhrisku waa ficil casri ah'. Si dadka loo siiyo caado ay ku akhriyaan buugaagta gaadiidka dadweynaha, [More ...]
Duqa magaalada Mehmet Zeybek'in AFRAY, oo ah mid ka mid ah balanqaadyadii dadaallada doorashada iyo daraasadaha ayaa bixiyay natiijooyin wanaagsan. Duqa magaalada Zeybek ayaa u sheegay ODAK, kon mashruuca qandaraaska AFRAY waxaa la qaban doonaa bisha Oktoobar. Farxadda la wadaaga injiilka muwaadiniintayda [More ...]
Duqa Magaalada Antalya Metropolitan Munhittin Böcek, Antalya, waa la qorsheeyay, xeerarka, aqoonsiga ayaa wali kashaqeynaya hadafka laga leeyahay magaalo. Macnaha guud, shaqadu waxay ka bilaabatay dib u dhiska Qorshaha Masterka Gaadiidka ee jira si loo daboolo guud ahaan degmada 19. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Xaqiiqdii, sürpriz layaab kuuma ahan kuwa sida dhow ula socda. Marka la eego, joojinta hindisada aan shalay soo gudbinay waxaa loo arkaa natiijo la saadaaliyay. Mawduuca: TCDD 3 Tender for Bursa-Osmaneli Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Abriil 2018 [More ...]
Guddoomiyaha Gobolka CHP Karabük Abdullah Cakir, Machadka Tareenka Teknolojiyada waa in laga sameeyaa Karabuk, ayuu yidhi. Gudoomiyaha Gobolka Cakir, Machadka Teknolojiyada Gaadiidka ee Tareenka ayaa sheegay in magaalada sidoo kale la arkay. Karabük, Turkey ee dalabaadka bir iyo bir ah sharafta nool sanado badan, dunida [More ...]
Waa kuwan dhamaan sicirka kor u kaca! .. Khidmadaha Gawaarida Cusub, Buundada iyo Yeerooyinka Yaanooyinka. Korantada, socodka gaaska dabiiciga ah kama noolaan karaan naxdinta muwaadiniinta; Wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka, YHT iyo tikidhada tareenka rakaabka, khidmadaha boostada ayaa ruxay iyadoo qiimaha uu kordhay. Wadada weyn, tareenka [More ...]
Qandaraas ayaa loo qabtay Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri si ay u kireyso meelaha lagu xayeysiisto ee kuyaala aaladda catenary iyo basaska iyo basaska iyo taraamyada wadada tareenka sanadka 6. Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri iyada oo loo marayo marinnada habka wadooyinka tareenka iyo [More ...]
Artova, Bekdiğin, Suluova, Turhal iyo Yeşilyurt Stations Panel Nooca Dhoofinta darbiga Shaqooyinka Tareenka Laxiriira iyo Wararka Kale ee Aad XiiseyneysoRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Nidaamkeenna, maalin kasta oo ah 25.01.2019 [More ...]
Duqa magaalada Düzce, oo mashruuc ka diyaariyay Istanbul Street. Faruk Özlü, wuxuu riixay badhanka hirgelinta mashruuca cusub. Mashruuca cusub ee saddexda haad ee waddada ayaa marka hore ka saari doona biraha taraamyada. Tan awgeed [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaa inay soo bandhigto qiimayaasha taariikhiga ah iyo kuwa dabiiciga ah ee Kayseri, gaar ahaan Xarunta Dalxiiska Jiilaalka ee Erciyes. Duqa Magaalada Caasimadda Memduh Büyükkılıç wuxuu la kulmay dalxiisayaasha Yukreeniyaan ee Erciyes. Iyada oo la shaqeynayo Dowladda Hoose, Dalxiiska Yukreeniyaan [More ...]
7 waxaa lagusoo abaabulay Xarunta Sayniska Konya oo cinwaankeedu yahay “Sidee loo, Sidee u shaqeeyaa yıl. Bandhiga Sayniska Konya waxaa soo booqday boqol iyo konton kun oo qof. Konya degmada Metropolitan wakiishay by TUBITAK taageeray xarunta ugu horeysay Turkey ee sayniska ee Science Konya [More ...]
IMBB Dalxiiska Horumarinta Dalxiiska 'Saxiix Afka' Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa billowday mashruuc cusub si kor loogu qaado tirada dadka dalxiisayaasha ah ee imanaya magaalada isla markaana caawinaya soo-booqdayaasha shisheeyaha ah. Gaar ahaan jasiiradda taariikhiga ah ee ay dalxiisayaasha shisheeyuhu ka yimaadaan [More ...]
IETT waxay timid marxaladihii ugu dambeeyay tijaabooyinka la xiriira “Wadida Nabdoonaanta iyo Darawalka Telemetry System, oo siiya darawalada digniinta ugu horayso. Iyada oo nidaamka loo isticmaali doono marinka 'Metrobus', masaafada dabagalka iyo ku xadgudubka haadka ayaa laga hortegi doonaa. Mid ka mid ah xiriiriyaasha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM) [More ...]
Taariikhda Maanta 8 Oktoobar 1892 Kharashka ku baxaya line-upka Thessaloniki-Mitrovica ee saldhigga Karasulu si uu uga bilaabo Firecik oo uu u sii maro Komotini iyo Drama ayaa la siiyay Faransiiska René Bauda-uy, oo ah bangiga Istanbul. 1 bisha oktoobar wuxuu ka bilaabmayaa 1893 1 Abriil at 1896 [More ...]